Showing २१-२६ of २६ items.
केही बर्षयता बलात्कारका घटनाहरु बढ्दै गएका छन् । यौनका बिषयमा मानिसमा रहेको विकृत मानसिकताका कारण बलात्कारका घटना हुने गरेका छन् । तर सदियौंपूर्व यौनलाई व्यवस्थित र अनुशासित बनाउन लेखिएको पुस्तक थियो, कामसूत्र । कामसुत्रमा यौनका बिषयमा खुलेर चर्चा गरीएको थियो ।कामसूत्र भनेको केवल यौनक्रियाकलाप मात्र होइन, यसमा यौनसँगै जोडिएका थुप्रै बिषयमा ज्ञानहरु उल्लेख छ । कामसूत्रले सदियौबाट रतिक्रिया र संभोगको बारेमा मार्गदर्शन गर्दै आएको छ । यो पुस्तकमा संभोगको पोजिसनसाथै प्रेम जीवन सुमधुर बनाउने यौनका बारेमा उल्लेख छ । सोहि पुस्तक कामसूत्रमा पुरुषका केहि यस्ता गुणबारे उल्लेख छ, जसले स्त्रीलाई कसरी आर्कष
काठमाडौं । कल्पना गर्नुहोस्, तपाईंले खाजा मगाउनुभयो तर खाजा गलत आयो । गलत भन्नुको मतलब मम मगाउँदा चाउमिन आएको भने होईन नि । सामान्य गल्ती जस्तै तपाईंले शाहकारी खाजा मगाउनुभयो तर झुक्केर अर्कै पर्न गयो ।तब तपाईं के गर्नुहुन्छ ? पहिलो त उक्त खाजा फिर्ता पठाउनुहुन्छ र पैसा पनि माग्नुहुन्छ । अर्को फेरि आफुले खोजेको खाजा मगाउनुहुन्छ । तर भारत उत्तर प्रदेशको गाजियाबादमा एक महिलाले जे गरिन्, त्यसले सबैलाई हैरान पारेको छ ।त्यहाँ, एक शाकाहारी महिलाले पिज्जा मागेको थियो, तर कम्पनीले मांसहारी पिज्जा पठायो । महिलाले कम्पनीलाई उपभोक्ता अदालतमा लिएर गएकी छिन् । उनले कम्पनीले गरेको त्यस गल्तीका लागि क्षतिपूर
काठमाडौं, १ फागुन । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) का शाखा कार्यालयमा अवैध गतिविधि बढ्न थालेपछि वैदेशिक रोजगार विभागको टोली उपत्यकाबाहिर रहेका म्यानपावर कार्यालयमै पुगेर अनुगमन तीव्र रुपमा अघि बढाइरहेका छन् ।शुक्रबार विभागको आकस्मिक अनुगमन टोली इटहरी पुगेर त्यहाँ रहेका म्यानपावरका शाखा कार्यालयहरुमा अनुगमनको काम तीव्र रुपमा गरिरहेको विभागका सूचना अधिकारी टिकामणि न्यौपानेले न्युज २४ नेपाललाई जानकारी दिए ।नले भने, ‘अनुगमन अधिकृत कुशल बरालको नेतृत्वमा विभागको टोली शुक्रबार इटहरी पुगेको छ । शुक्रबार त्यहाँ रहेका केही म्यानपावर कम्पनीमा अनुगमन गरिएको छ । तर, यकिन रुपमा जानकारी
दक्षिण कोरियामा गत डिसेम्बरदेखि कोरना माहामारीको तेस्रो लहर फैलिएपछि गत जनवरीमा मात्रै रोजगारी गुमाउनेको सङ्ख्या नौ लाख ८२ हजार पुगेको छ । एकै महिनामा रोजगारी गुमेको यो सङ्ख्या गत २३ वर्षयताकै सबैभन्दा उच्च हो ।त्यहाँको एक सरकारी तथ्याङ्कअनुसार वर्षको पहिलो महिनामै करीब १० लाख रोजगारी कटौती गरिएको छ । यसरी बेरोजगार हुनेको सङ्ख्या सन् १९९८ मा भएको एशियन वित्तीय सङ्कटपछिको पहिलो हो ।कोभिड– १९ का कारण सरकारले पारेको कडा सामाजिक दूरीका कारण रोजगारी गुमाउनेमा साना तथा मझौला कम्पनीमा काम गर्ने कामदार सबैभन्दा बढी छन् । त्यसैगरी होटेल रेस्टुरेन्ट तथा अन्य मनोरञ्जनस्थलमा काम गर्ने अधिकांश कामदारले रोज
सुरु हुँदै राष्ट्रिय जनगणना २०७८, कति पुग्ला नेपालको जनसंख्या
काठमाडौं । नेपालको जनगणना २०७८ सुरु गर्नका लागि तयारी थालिएको छ । प्रत्येक १०÷१० बर्षमा हुने जनगणना यसबर्ष जेठदेखि सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ विभागले १२ औँ राष्ट्रिय जनगणना गर्न २०७८ बैशाख जेष्ठ र असारमा सञ्चालन गर्ने गरी तयारी गर्दै छ । अहिलेसम्म जनगणनाका पूर्वका कामहरु सबै जिल्ला र प्रदेशहरुमा गरी ८७ वटा कार्यालय स्थापना गर्ने र उत ठाउमा खटिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला जनगणना अधिकारी र सहायक जिल्ला अधिकारी प्रत्येक जिल्लामा व्यवस्थापन गरिएको छ । विगतमा व्यक्तिगत अन्तर्वाता गरेर विवरण संकलन गर्ने गरिएको थियो । तर, यस बर्ष विगतका बर्षमा भन्दा अतिरित विधिबाट कार्य गर्
नेपाल पत्रकार महासंघको चुनाव चैत २५ गते
इलाम : नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन २०७७ साल चैत २५ गते हुने भएको छ ।महासंघको इतिहासमा पहिलोपटक हुन लागेको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रियामार्फत २५ गते निर्वाचन गर्न लागिएको हो ।महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले चैत २५ गते निर्वाचन हुने जानकारी दिए । चैत ७ गते निर्वाचन सम्वन्धी सम्पूर्ण कार्यतालिका सार्वजनिक गरिने छ ।